Daawo Sawirada Madaxweynaha Somalia oo Isbitaalka ku booqday Ciidamadii ku dhawaacmay Buulo Burde « AYAAMO TV
Daawo Sawirada Madaxweynaha Somalia oo Isbitaalka ku booqday Ciidamadii ku dhawaacmay Buulo Burde
1052 Views Date March 18th, 2014 time 4:13 pm
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kormeerka uu ku tegay Isbitaalka Xalane oo la dhigay dhaawacyadii ku wax yeeloobay weerarkii Al-Shabaab ay xalay ka geysteen Degmada Buulo-Barde ee Gobolka Hiiraan
Madaxweynaha iyo Xubnihii la socotay markii ay gaareen Isbitaalka Xalane waxa ay kormeereen qolalka la seexiyay dhaawacyada, waxaana Madaxweynuhu uu mid mid u kortagay askarta dhaawaca aheyd, isaga oo xaaladooda caafimaad ka wareystay.
Dhakhaatiirta la tacaalaysa xaaladda caafimaad ee dhaawacyada ayaa Madaxweynaha u sheegay inta badan dhaawacyada askarta ay tahay mid wanaagsan, islamarkaana loo sameeyay daaweyntii u baahnaayeen.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo saxaafadda kula hadlay gudaha Isbitaalka Xalane ayaa ka hadlay wixii uu ku arkay Isbitaalka iyo sida ay tahay xaalada caafimad ee Dhaawacyada.
“Sida ay dhagar qabayaashu damacsanaayeen iyo waxa aan aragnay aad bay u kala fogyihiin, geesinimo dheeri ah yay ka qaadeen ciidamadu, cadowga waxa uu damacsanaa iyo sida ay ciidanka uga hortageen waa wax aan caadi ahayn, inta dhaawacooda halista ku jirta waxaa lagu dadaalayaa sida lagu daaweyn karo oo dalka dibediisa loogu qaado, kuwaan iyo kuwa kale ee codowga la diriraya ku dhaawacma dowladdu waxa ay ku dadaalaysaa daaweyntooda iyo daryeelkooda” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Mudane Xasan Sheekh Maxmuud ayaa markale ku celiyay in Kooxda Al-Shabaab Al-Qaacida aysan wax naxriis ah u haynin shacabka Soomaaliyeed loona baahanyahay in si wadajir ah loola dagaalamo.
“Dadka Soomaaliyeed waxaan markale u sheegaynaa in nimankaasi ay yihiin cadow aan dalka. dadka, iyo diinta aan wax u ogoleen, marka waxaan rabnaa in si wada jir ah loola dagaallamo cadowga umadda Soomaaliyeed, teeda kale mudadda yarta ah ee dagaalku lagula jiro shacabka waxa looga baahanyahay inay sii xoojiyaan taageeradooda” ayuu markale Madaxweynuhu hadalkiisa ku daray.
Dhaawacyadan oo isugu jiray ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwo Hiil-walal ee Dalka JabUuti ee qeybta ka ah AMISOM ayaa waxa ay ku soo dhaawacmeen qaraxyo xalay ka dhacay Degmada Buulo-Barde ee Gobolka Hiiraan oo ka mid aheyd deegaanada dhowaan la xoreeyay Maleeshiyaadka Al Shabaab.